निर्णायक सन्तोष पन्त भन्छन्, ‘हिमेशको भोट १० लाखले बढी छ, कसरी खबपुले जित्छ?’ - Everest Dainik - News from Nepal
निर्णायक सन्तोष पन्त भन्छन्, ‘हिमेशको भोट १० लाखले बढी छ, कसरी खबपुले जित्छ?’
काठमाडौंः नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड–अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को विजेता हिमेश पन्त भएसँगै अर्का प्रतिस्पर्धी खड्गबहादुर पुन मगरका ‘खबपुका’ समर्थकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
विजेता छनोट निस्पक्ष नभए भन्दै उनका समर्थकहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । खबपुका समर्थकहरु शनिबार ‘फिनाले’ भएको स्थल बाहिर नाराबाजी गर्न थालेका थिए ।
नारीबाजी भएपछि कार्यक्रमका निर्णायकमध्ये सन्तोष पन्तले भने, ‘हिमेश पन्तले खबपु भन्दा १० लाख भोट बढि ल्याएका छन् । कसरी खबपु विजेता हुनेरु यो पनि कुनै तर्क हुन सक्छरु धाँधली कार्यक्रम आयोजकले गरेको भए हामी जजहरु चुप बस्थ्यौ होला तरु यो विरोध वेकार हो । भोटिङ कै आधारमा विजेता भएका हुन् हिमेश पन्त ।’
याे पनि पढ्नुस प्रशारण नहुँदै कमेडी च्याम्पियनको नतिजा सार्वजनिक, को भए आउट ?
यस विषयमा कार्यक्रम निर्माण पक्षले पनि कुनै किसिमको धाँधली नभएको बताएको छ ।
हिमेश बने पहिलो ‘कमेडी च्याम्पियन’
नेपालकै पहिलो रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को उपाधि धादिङका हिमेश पन्तले जितेका छन् ।
उनले शनिबार ‘ग्रान्ड फिनाले’मा खड्गबहादुर पुन मगर ९खबपु० र सुमन कोइरालालाई पछि पार्दै पहिलो संस्करणको ‘कमेडी च्याम्पियन’ को उपाधि जितेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस नायिका ऋचा शर्माले गरिन् बिहे
उपाधिसहित हिमेशले २५ लाख नगद र कार जिते । उनलाई मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्य मह जोडीले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
‘कमेडी च्याम्पियन’को पहिलो संस्करणमा सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदीप भट्टराई र ऋचा शर्मा निर्णायक रहे । सोको होस्ट रिमा विश्वकर्माले गरिन् ।
याे पनि पढ्नुस ‘कमेडी च्याम्पियन’ ग्रान्ड फिनालेः कहाँ हुँदैछ ? कति छ टिकट ?
ट्याग्स: ‘कमेडी च्याम्पियन’, खड्गबहादुर पुन मगर, सन्तोष पन्त, सुमन कोइराला, हिमेश पन्त